Kyoto University - Study in Japan. Imfundo Ephakeme Abroad.
Wasekelwa : 1897
Ungakhohlwa discuss Kyoto University
Selokhu e 1897, Kyoto University uye wazikhandla ukuze sihlakulele inkululeko academic ngaphansi umoya nokuzethemba nokuzihlonipha, futhi ukuvula up khathizwe amasha e creative mzamo wakho yezazi. Inyuvesi futhi uye wafuna neqhaza nokuhlalisana ngokuthula kumphakathi wonkana global.
Izwe lethu okwamanje kubhekene izinguquko eziningi ngokushesha lokho kwakuyobe zicatshangwe ekhulwini lama-20. The global isakhiwo ukungqubuzana, kulindeleke ukuba luxazululwe ekupheleni kweMpi Yomshoshaphansi, empeleni ezikhulayo e kokubili yinkimbinkimbi futhi ufake umfutho owengeziwe ngenxa izingxabano zobuzwe nezenkolo. Ngesikhathi esifanayo, ijubane kwendawo ezungezile embulungeni yonke ngesivinini, okungakaze kube khona izinhlekelele ezinkulu kanye nezifo esibulalayo esithathelwanayo ihlukumeza emhlabeni jikelele, kanye nezibhelu ezilandela lokhu zezimali anikine kokubili nomnotho wamazwe futhi nokuphila kwabantu ngabanye ukuba yenza kwabanda kwamancane. Amayunivesithi kudingeka sicabange ngokungathí sina ngalokho ekumelelayo kulezi zikhathi zeziyaluyalu. Khonamanjalo, uhulumeni Japanese asebenta amanyuvesi kanye nezimboni ukukhuthaza ukutshalwa capital womuntu global, futhi ebiza emayunivesithi lokuqala kabusha eklanyelwe ukukhulisa ekukwazini kwabo ukuncintisana nasemhlabeni wonke. Kyoto University manje kudingeka ukukhomba indlela engcono baphendule okufunwa uhulumeni nomphakathi seNingizimu neAfrika ngesikhathi siqotho ekusungulweni umoya walo.
Umnyombo ohambweni ezintathu zaseyunivesithi imfundo, ucwaningo, futhi umphakathi. Ababili laba, ucwaningo kanye neqhaza kwezenhlalo, bathambekele ukushintsha eziphendula izitayela global. Ezemfundo, Nokho, ine nature ebalulekile ukuthi ngikholwa ukuba abe ezingenakuguquleka okungenakwenzeka. Ngokuvumelana nokuzinikela kwayo yokufunda ezimele, Kyoto University kufanele silondoloze isikhundla salo njengoba yindawo inkululeko academic, kancane bathinteka emphakathini jikelele kanye Okungenamkh by mhlangano. Ukuze wenze kanjalo, inyuvesi kumele kube yindawo lapho emizamweni yakho yokwenza lokho academic uqhubeke engaphazanyiswa, kuyilapho ukuhlinzeka amawindi ezweni kanye nomphakathi. Lezi amafasitela angavulwa amalungu ubuhlakani ifakwe cutting edge ulwazi oluthuthukayo lomhlaba kanye nomphakathi ukuthi alikho emandleni, kodwa indima ebaluleke kunazo enyuvesi yethu udlalwa by abafundi ngubani siphumele ngaphandle ngamafasitela. Sifanele sisebenze ngokucophelela nabalingani emisebenzini kahulumeni ukuhlinzeka amawindi evumela abafundi ukwenza ukusetshenziswa best esiwusizo amakhono ziye zasungula eyunivesithi.
Izinguquko eziningi njengamanje Ziyaqhubeka ezindabeni zezimali amanyuvesi, kuhlanganise ukwehla jikelele yokusebenza noxhaso ukugcizelelwa ezikhula ngezimali yokuncintisana. It sekuyinkinga kubalulekile kithi ukuze aqinisekise izimali zethu siqu ukwenza ngcono imvelo sezemfundo. Ngikholwa ukuthi kumele enze icala emphakathini kwisizwe sonkana ngesidingo le ntuthuko, ethembeni ethola ukwesekwa ophanayo kusukela amabhizinisi alindele kakhulu Kyoto University, futhi kusukela alumni zethu siqu. Ngiqale phambili ukwakha amaxhama kunamandla nomphakathi, okwenza izinzuzo indawo yethu Kyoto-enhlokodolobha yezwe-esaziwayo Japanese isiko-futhi ukusebenza ngokusebenzisana namanye amayunivesithi ukuthuthukisa umuzi ngokwawo ibe campus ezilapho academic. Ngaphezu kwalokho, uma Ukuze siphumelele ekuheheni ubuhlakani ezivelele kanye nabafundi emanyuvesi emhlabeni jikelele, lelisetulu sidzinga kutfutfuka lwezifundo original kanye zokucwaninga ngokubambisana ukuthi kuzongisiza ezikhangayo Kyoto sika, ngibenze ezaziwa emhlabeni. Ngiyaqiniseka ukuthi le mizamo uyoba neqhaza elikhulu ekuthuthukiseni esifundeni sethu, futhi ikusasa Japan kanye nezwe wonkana.
Njengomuntu olunzulu, isikhungo ucwaningo ngamakhasimende, Kyoto University kufanele sihlanganise ubuciko bayo ovulekile isisekelo imfundo, ezikhethekile Undergraduate imfundo, futhi baphothule izinhlelo zokufundisa ngezindlela ukuthi ukuhlomisa abafundi lokusungula khono practical. Ukuze wenze kanjalo kudinga ukuthuthukiswa izindlela zokufundisa enikeza ilungiselelo phezulu ahlukene ulwazi izigwegwe kanye zokusiza ezihlukahlukene ukukhetha yokufunda. Kuthatha isikhathi sokuba abafundi ukuba uqaphele amakhono abo ngokugcwele. Ngithemba ukuthi anganikeza enokweseka yokufunda imvelo lapho abafundi ingangeni bagijimela ekwenzeni izinqumo ngekusasa, futhi esikhundleni kungaba ukulandela inqubo omuhle amaphutha azobasiza ukuba babe nokuzethemba okwengeziwe ikusasa ukuthi ekugcineni ukukhetha.
Ukuze sihlakulele abafundi obuningi amakhono evelele, wonke amalungu abasebenzi ubuhlakani kanye nezokuphatha kumele bazibophezele ekuphishekeleni ucwaningo kanye neqhaza kwezenhlalo imizamo ukuheha amehlo omhlaba. Kyoto University ine 10 amandla, 18 izikole graduate, 14 zocwaningo (ngaphezu kwanoma iliphi elinye enyuvesi eJapane), kanye nezinye izikhungo eziningi zemfundo kanye nocwaningo. I uzokubheka lokho abakwenzayo okusemandleni ami ukuqinisekisa ukuthi imigomo yethu isihambile yonkana zonke lezi amagatsha ahlukene emphakathini nyuvesi.
Graduate School of Izincwadi
The forerunner of the Kyoto University was the Chemistry School founded in Osaka in 1869, okuyinto, despite its name, taught physics as well. Kamuva, le Third Higher School was established in the place ofSeimi-kyoku e 1886, it then transferred to the university’s present main campus in the same year.
Ngemva kweMpi Yezwe II, the current Kyoto University was established by merging the imperial university and the Third Higher School, which assumed the duty of teaching liberal arts as the Faculty of Liberal Arts. The faculty was dissolved with the foundation of the Faculty of Integrated Human Studies in 1992.
Uyafuna discuss Kyoto University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa